Iwo akanakisa 'makumi mapfumbamwe evana mafirimu ekuyerera | Garari - Varaidzo
Kuru Style Blog Varaidzo Macelebs
Iwo akanakisa 'makumi mapfumbamwe evana mafirimu ekuyerera
Goverana Tweet Pin Email NaMegan Riedlinger Unoda firimu-inoshamwaridzika yemhuri yehusiku hwemamuvhi? Wonderwall.com yaunganidza mamwe emhando yepamusoro 'makumi mapfumbamwe evana vemamuvhi mafirimu parizvino anotenderera pamasevhisi seNetflix, Hulu, Disney + uye Amazon Prime Vhidhiyo. Kutanga kumusoro? 'Mhandara diki,' iyo inopemberera makore makumi maviri neshanu yaburitswa muna Chivabvu 10, 2020. Unogona kubata mutambo wemhuri unogara paNetflix uye uteedzere saga yaSara Crewe (inoridzwa naLiesel Matthews wechidiki), mudzidzi wechikoro chebhodhingi ana baba anofa panguva yeHondo Yenyika I. Ramba uchiverengera mamwe 'makore makumi mapfumbamwe evana'…
RELATED: Akanakisa 'makumi masere evana mafirimu
Disney + yakazara nemamwe akanakisa '90s mafirimu evana enguva dzese - kusanganisira' Aladdin '! Katuni anodikanwa akatanga kurova dzimba dzemitambo muna 1992 uye akazove firimu repamusoro soro mugore iro. Yakaendererawo nekuhwina maviri maAward Awards uye rwiyo rwegore Grammy ye 'Nyika Yese Idzva.' Unoda kutora rwendo kuenda kuAgrabah? Iwe uri mune rombo rakanaka - mhuri yese inogona kugara mukati uye kunakidzwa nenyaya yeAladdin inonakidza Princess Jasmine uye inoyerera paDisney + manheru ano.
RELATED: Iwo akanakisa echinyakare ehupenyu mafirimu eDisney
catherine zeta jones hapana makeup
Kutsvaga inosimudzira ngano nemhondi rwiyo? 1993's 'Mahara Willy' anotaurira nyaya yemwana wekurera uyo anoshamwaridzana nemhondi whale uye anomubatsira kutiza hutapwa. Iyo firimu yaive nerinotyisa rwiyo rwiyo rwekuiperekedza - Michael Jackson's 'Iwe Uchave Uripo'! Tenderera ikozvino paHulu.
RELATED: Nyeredzi dzakadudzira imbwa mumabhaisikopo
Kana iwe uchishaya basketball uye uchitsvaga zvekunakidzwa, inguva yekutangazve 'Space Jam'! Mhuri ya1996 yemhuri nyeredzi nyeredzi Michael Jordan mune yekunyepedzera kutora yake 1993 NBA mudyandigere uye akazotevera 1995 kudzoka. Musiyano mukuru? Vanyori veLooney Tunes ndivo vari kumukumbira kuti adzokere kubhasikiti! Iyo yemitambo makomiki yaive yakanyanya kurohwa mumitambo panguva yekuburitswa kwayo - yakatozove yakanyanya kukwira bhasikoro bhaisikopo renguva dzese. Fambisa usiku huno paNetflix.
1994's 'The Lion King' yakave yakakwira kwazvo firimu yehupenyu nguva dzese mushure mekunge yabuda! Katuni yeDisney, iyo inotevera hupenyu hweshumba diki Simba mukumuka kwekufa kwababa Mufasa, yaisanganisira rwiyo rwakanaka nenziyo dzakanyorwa naElton John naTim Rice. Pakuburitswa vhidhiyo yayo, yakave iyo yakanakisa yekutengesa firimu pamusha vhidhiyo. Iyo zvakare yakatora maviri maAward Awards uye yeGolden Globe yeakanakisa ekufambisa firimu mimhanzi kana komedhi. Tarisa yakakurumbira Disney katuni nhasi paDisney +.
Imwe firimu reDisney rekare kubva kuma'90s iwe aunogona kuyerera chero nguva? 1991 'Runako nechikara' - iyo inotapira ngano yerudo pakati pemukadzi mudiki anoda bhuku nemuchinda akashandurwa kuita chikara. Iyo bhaisikopo, iyo yakahwina iyo Golden Globe yeakanakisa ekufambisa firimu mimhanzi kana komedhi uye ikave yekutangayekutanga yakazara-yakareba animated firimu mu cinema nhoroondo kuti isarudzwe yeakanakisa pikicha Academy Mubairo, iri pamusoro peDisney + izvozvi.
Ndiani asingade Stuart Little? 1999's 'Stuart Little' inoratidzira mutsoropodzi kubva mubhuku ra1945 rezita rimwe chete rakasimudzwa kuenda kuCGI yehupenyu / mhenyu-chiito mutambo. Nyeredzi dzinoshamwaridzika dzemhuri dzinoshamisira Geena Davis, Hugh Laurie naJonathan Lipnicki - vaina Michael J. Fox, Nathan Lane naJennifer Tilly vachidetemba vatambi. Chokwadi chinonakidza: M. Husiku Shyamalan akanyora kunyora screenplay, uye iyo flick yakawana yakanakisa yekuona mhedzisiro Oscar kudoma (uye akarasikirwa ku'The Matrix '). Tora iyi flick kutenderera ikozvino paAmazon Prime Vhidhiyo.
Pakaburitswa 'Hook' muna 1991, yaive yechinyakare yechinyakare! Steven Spielberg akatungamira firimu rekunyepedzera, rairatidza uye nyeredzi-nyeredzi naRobin Williams, Dustin Hoffman naJulia Roberts. Iyi firimu inobata zvinoitika kune mukuru Peter Pan (Robin) apo vana vake vabiwa naKaputeni Hook uye akamanikidzwa kudzokera kuNeverland. Fambisa ikozvino paNetflix!
Ndakafungidzira kuti iyo yechirimo 2020 kuburitswa yeanorarama-chiito vhezheni ye 'Mulan' yambomiswa? Hatisi kukupa mhosva! Neraki, ye1998 animated vhezheni yenyaya nezve mukadzi wechiChinese murwi - iyo inoratidzira izwi rinoshanda kubva kuna Ming-Na Wen, Eddie Murphy uye BD Wong - inowanikwa kutarisa chero nguva paDisney +.
Kana iwe uri mune mamiriro emumhanzi, 1992's 'Newsies' inogona kunge iri mhinduro. Iyo Disney flick nyeredzi idiki Christian Bale pamwe naBill Pullman naRobert Duvall. Kunyangwe paakawana ongororo dzakaipisisa mushure mekuburitswa, yakazove yechinyakare yechinamato uye yakashandurwa ikave Broadway play iyo yakakunda mbiri Tony Awards. Iwe parizvino unogona kutarisa iyo yekutanga kugadziridzwa paDisney +.
'A Goofy Movie' yakabuda mu1995, uye mubhuku redu, yakanyatsodzikiswa pasi. Pamwoyo peiyo firimu, inyaya inotapira yababa nemwanakomana wavo vanokura padyo parwendo rwehove. Yaivewo neinoshamisa rwiyo rwekutenda kumatoni kubva kuna Tevin Campbell. Tarisa uone Disney + manheru ano.
Kurota Nguva yeKisimusi? Wobva watarisa ma1990 'Kumba Koga'! Kunyangwe iyo flick ichitenderedza zvinoitika apo hunhu hwaMacaulay Culkin, Kevin, netsaona akasiyiwa pamba ari ega panguva yezororo, inosimudza gore rese nekuda kwekunyepedzera kwemwana sezvo achidzivirira imba yake kubva kumbavha dzakatambwa naJoe Pesci naDaniel Stern . Dhizaira mairi manheru ano paDisney +.
caitlyn jenner anoda kudzokera bruce
'Musungo Wevabereki' pakutanga wakabuda muna 1998 senzira yekudzokororazve firimu ra1961 rezita rimwe chete. Iyi vhezheni vhezheni yakakurumidza kuve fan yekunakidzwa yekutenda muchikamu chikuru kune iro stellar basa Lindsay Lohan Akaunza mapatya Hallie naAnnie kuupenyu. Zvakaoma kutenda iyo flick yaive yake yekutanga bhaisikopo! Zvione paDisney +.
is ellen achisiya show yake muna november
Kana yako mhuri iri kutsvaga yakanaka yekuuya-ye-zera mutambo, tarisa yedu inotevera tora! 'Iyo Sandlot' yakatanga kubuda muna 1993, asi iyo firimu yechinyakare nezve zhizha baseball inogona kutepfenyurwa chero nguva yaungade paDisney +.
'Tom naHuck' ndizvo zvaive zviroto zve 'makumi mapfumbamwe evana' zviroto pazvakazoburitswa kumashure muna1995, tichitenda zvikuru nenyaya yekuti yaive nyeredzi mbiri dzepamoyo dzevechidiki - Jonathan Taylor Thomas naBrad Renfro. Vatambi vaitamba Tom naHuck, zvichiteerana, mune yeanonakidza-komiti firimu, iyo iwe yaunogona kuyerera ikozvino paDisney +.
Tevere kumusoro, inouya-ye-zera firimu iyo yakafadza vateereri payakaburitswa kumashure muna 1991. 'My Girl,' iyo yakaratidza nyeredzi Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin naAna Chlumsky, vakatarisana nemusikana ane makore gumi nerimwe. kukura muPennsylvania kumashure kwa1972. Kubva pane iro bhuku rezita rimwe chete, iyi inotapira uye yemanzwiro ngano yakashandurwa kuita muhombe bhokisi hofisi yakarova. Iwe unogona parizvino kuerera pane Netflix.
'Muchinda weEjipitori' pakutanga akabuda muna1998, asi iyo animated flick inosimudza anopfuura makumi maviri emakore gare gare. Iyo DreamWorks bhaisikopo inotevera hupenyu hwaMosesi uye inoratidzira basa reizwi kubva kune inoshamisa rosta renyeredzi dzinosanganisira Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Helen Mirren, Steve Martin naMartin Short. Tenderera ikozvino paHulu!
Unoda kupukunyuka kubva kune ino tsime uye nguva yechando kupatsanurwa? Wadii kutarisa 'Iyo Nightmare Pamberi peKisimusi'? Iyo Tim Timton Flick ya1993 inotevera Jack Skellington - Pumpkin King weHalloween Town anoendeswa kuKisimusi Town uye anoba Santa Claus mushure mekufunga kuti arikuda kutenderera tsika yaSt.Nick yekupa zvipo - uye anokuisa mumweya mazororo ese ari maviri. Iyo yechinyakare yechinamato inowanikwa kutarisa paDisney +.
'Muppet Treasure Island' yakatanga kubuda muna1996, asi nekuda kweDisney +, unogona kutenderera mutambo wemimhanzi chero nguva. Iyo flick nyeredzi iyo yese Muppets gang pamwe nevatambi Tim Curry, Billy Connolly naJennifer Saunders.
Katuni yakadzika pasi peDisney - 1999 'Tarzan' - parizvino iri kutenderera paNetflix. Tony Goldwyn, Minnie Mutyairi, Glenn Close naRosie O'Donnell vese vakapa mazwi avo kune iyo firimu yehupenyu, inosanganisira rwiyo rwekuhwina mubairo weAcademy 'Uchave Mumoyo Wangu' naPhil Collins.
Murray Vhara / Warner Bros / Kobal / Shutterstock Disney / Pstrong / Photofest Photofest / Photofest Warner Bros. Mifananidzo / Photofest Walt Disney Mifananidzo / Photofest Rex USA Moviestore / Shutterstock Tristar / Amblin / Kobal / REX / Shutterstock Buena Vista Mifananidzo / Photofest Disney / Kobal / Shutterstock Buena Vista Mifananidzo / Photofest 20th Century Fox Buena Vista Mifananidzo Distribution / Rex USA John Bramley / 20th Century Fox / Kobal / REX / Shutterstock Frank Masi / Walt Disney / Kobal / Shutterstock Snap / Shutterstock Zviroto zveLlc / Kobal / REX / Shutterstock Kubata bata / Kobal / Shutterstock Rex USA Walt Disney Mifananidzo / Photofest Kumusoro Kunotevera Muchato mafirimu
Mukati me'Great Britain Baking Show 'mutongi Paul Hollywood's hombe kurambana kugadzirisa, kudanana kutsva nemukadzi mudiki
heidi klum uye chisimbise vana
sainzi daniel austin akawanikwa akafa
ko benjamin keough anoita nezvei